युवापुस्तामा बढेको मदिराको लतले स्वास्थ्यमा पार्ने गम्भीर असरहरु – खबर खुराक
Home > Uncategorized > युवापुस्तामा बढेको मदिराको लतले स्वास्थ्यमा पार्ने गम्भीर असरहरु
३ मंसिर २०७६, मंगलवार ०६:५६
काठमाडौं, ३ मंसिर। फिजिसियन डा. रवीन्द्र पाण्डेले मदिराको अत्यधिक प्रयोगले कलेजो, आन्द्रा, मिर्गौला, स्नायु प्रणालीमा असर पर्ने बताए । मोटो शरीर भएका व्यक्तिले धेरै मदिरा सेवन गरेमा कोलेस्टोरलको मात्रा बढेर हृदयाघात हुने बताउँदै डा. पाण्डेले आँखाको शक्ति पनि कमजोर हुने बताए । मदिरा प्रयोग गरिरहेको मान्छेले झट्टै छोड्दा हात काम्ने, आँखाले नदेख्नेजस्ता समस्या आउने हुनाले यसलाई कम गर्दै थोरै मात्रामा सेवन गरी बिस्तारै छोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रकाशित मिति: ३ मंसिर २०७६, मंगलवार ०६:५६
Previous: प्रचण्डले उठाए ओलीसँग आफ्नै कार्यविभाजनको विषय
Next: मुलुकमा पहिलोपटक आधुनिक फलाम खानी कम्पनी कानुनी रूपमा स्थापना